Madaxweynaha JF Soomaaliya ‘Farmaajo’ oo saxiixay Sharciga Batroolka dalka, kaddib markii ay.. | HalQaran.com
Madaxweynaha JF Soomaaliya ‘Farmaajo’ oo saxiixay Sharciga Batroolka dalka, kaddib markii ay..
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha JF Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay Sharciga Batroolka dalka, kaddib markii Labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyaddu ay soo dhammeystireen hannaankii sharci ee kaga aaddanaa dhaqan galkiisa.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay muhiimadda uu shacabka iyo Dowladnimada Soomaaliyeed u leeyahay sharcigan oo hagaya xuquuqda muwaadiniinteennu ay u leeyihiin in looga faa’iideeyo khayraadka ceegaaga dhulkeenna, isaga oo xeyndaab u noqonaya, kana ilaalinaya takri-falka, damaca shisheeye iyo musuqmaasuqa.
Madaxweynaha JF Soomaaliya, ayaa guddoonka Labada Aqal ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya, Golaha Xukuumadda, Xildhibaannada iyo dhammaan khubaradii Soomaaliyeed ee qaybta ka qaatay uga mahadceliyey dadaalka ay galiyeen sharcigan dhaxal reebka ah.
Sharciga Baatroolka ee uu meelmariyey Madaxweyne Farmaajo ayaa ku saleysan sharciyaddii Batroolka iyo macdanta dalka, dastuurka iyo Heshiiska Lahaanshaha, Maamulka iyo Wadaagga Kheyraadka Dabiiciga ee lagu saxiixay Baydhabo.
Madaxweynaha JF Soomaaliya 'Farmaajo
saxiixay Sharciga Batroolka dalka